XOG RASMI AH:- Sababta ka dambeysay in xawaaladda AMAL ee Garoowe albaabada la isugu dhufto (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG RASMI AH:- Sababta ka dambeysay in xawaaladda AMAL ee Garoowe albaabada la isugu dhufto (AKHRISO)
Ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland gaar ahaan kuwa ilaaladda u ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi C/xakiim Cumar Camey ayaa saakay aroortii xoog ku qabsaday xarunta xawaalada AMAL EXPRESS ee magaalada Garoowe.
Arrintaasi oo ay dad badan la yaabeen ayaa warbaahinta Bulshoweyn waxay kusoo ogaatay uljeedka rasmiga ah ee ka dambeeysay in ciidamada ilaaladda u ahayd madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi C/xakiim Cumar Camey ay xoog ku qabsadaan xaruntaas.
Qaar ka mid ah mas’uuliyiinta xawaaladda AMAL EXPRESS ayaa si hoose inoogu sheegay in arrinkaasi ay ka dambeysay kadib markii madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Cumar Camey uu shirkadda AMAL weydiistay lacag, balse markii ay madaxda shirkadaasi ka cudur-daarteen arrinkaasi inaysan sameyn karin uu falkaan kula kacay.
Subaxnimadii maanta ayaa xawaaladda AMAL EXPRESS ee magaalada Garoowe waxaa isku gadaamay ciidamado badan oo aad u hubeysan islamarkaana ilaalada ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Camey, waxayna banaanka usoo saareen dhamaan shaqaalihii shirkadda, islamarkaana joojiyay shaqadii ka socotay xaruntaas.
Dhinaca kale, warar madax banaan oo aynu heleyno ayaa sheegaya in sababta madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland C/xakiim Cumar Camey uu u xiray shirkaddaasi AMAL ay tahay ka dib markii la sheegay in mas’uuliyiinta shirkadaasi ay diideen inay dhiibaan lacag lagu qiyaasay 70-kun oo dollar, oo la sheegay in Puntland ay u aruurineeyso inay kula dagaasho maamulka Somaliland.
Ugu dambeyntii, marka laga soo tago xiritaanka xawaaladda AMAL EXPRESS xarunteeda magaalada Garoowe, waxaa maanta magaaladaasi laga hadal hayaa arrintaan oo la yaab ku noqotay dadka ku nool magaalada, waana hab dhaqan hogaamiye kooxeedyada lagu yaqaanay inay sharci darro ku weeraraan xarumaha ganacsiga kana qaataan lacago baad ah.